Okammuta Chika Okpalike na-aza ajuju n'Igbo Radio
E Keela Otu Nwoke n'Osisi, Pia Ya Tọọ Tọọ Maka Ịkwaso Nwatakịrị Iko n'Iké...
Ụbọchị bụụrụ nnọọ otu nwoke e tie okwe e rie oke n'isi ngwụcha izu ụka gara aga dịka ụmụ okorobịa iwe juru obi kere ya agbụ, wụọ ya agbara aka n'ahụ ma were ụtarị pịa ya tọọ tọọ maka ịkwaso nwata gbara naanị ahọ asaa.
Mba China Ga-Arụnye Ụlọ Ọrụ Ukwu n'Ọnịtsha...
Ụlọ ọrụ mba China, bụ ụlọ Golden Promise egosipụtala mmasị ha iwunye ụlọ ọrụ ukwu n'Ọnịtsha nke steeti Anambra. Ụlọ ọrụ ahụ, bụ nke jikọrọ aka ọnụ ya na ụlọ ọrụ China Communication Construction Company na ụlọ ọrụ Inland Water Ways Authority gosipụtara ma kwupụta mmasị a n'ọbịbịa ga bịara izute ọchịchị steeti ahụ, bụ nke weere ọnọdụ n'obi gọọmenti dị n'Awka, bụ ebe aka na-achị steeti ahụ nọrọ wee nabata ha.
A Dụọla Ndị Ọrụ Ahụike Ka Ha Dị Uchu n'Ọrụ Ha...
A kpọkuola ma dụọ ndị ọrụ ahụike ka ha gaa n'ihu n'itinye uchu n'ọrụ ha ma werekwa ya dịka ọkpụkpọ òkù iji wee mee ka mma ọrụ ha pụtawanye ihè.
Ndị Okpokò Ahọpụta Ndị Ndu Ọhụụ, Bie Nsogbu Ịzọ Ọkwa Ọchịchị n'Obodo ahụ...
Ọñụ dara nnọọ n'obodo Okpoko nke dị n'okpuru ọchịchị Ọgbaru nke steeti Anambra dịka ndị obodo ahụ nupụtara n'ìgwè wee họpụta ndị ndu ọhụụ, bụkwazị nke mere ka nsogbu ahụ gbagoro ahọ iri na otu n'obodo ahụ banyere ịzọ ọkwa onye ndu, bịa n'isi njedobe.
E Toola Obianọ Maka Iji Ụgbọala Nọchi Anya Ọkada...
Ofu òtù a maara dịka "APGA Media Warriors" etoola aka na-achị steeti Anambra bụ gọvanọ Willie Obianọ maka nkwa ahụ o kwere iji ụgbọala wee dochie anya ọkada n'Akwa nakwa Ọnịsha, bụ ebe o kwuru na ndị ahụ ji ọgba tum tum akpa ego agaghị agbazịkwa na ya malite n'abalị nke mbụ n'ọnwa Julayị ahọ a.
Ide Mmiri Agbàgbuola Mmadụ Anọ n'Ọnịsha, Mee Mkpamkpa n'Okpoko...
Nnukwu ihe egwu dara nnọọ n'Ọnịsha, steeti Anambra, n'izuụka gara aga, dịka oke idè mmiri gbàgburu mmadụ anọ ndị ọrụ ụlọ akụ ma tigwosiekwa ọtụtụ ụgbọ ala, n'ihi ike mmiri ozuzo kwọsịrị n'obodo ahụ, bụkwa nke zoro ọtụtụ awà.
INEC Edebànyego Aha Mmadụ Karịrị Ndè Abụọ n'Akwụkwọ n'Anambra...
Dịka ahọ 2019 na nhọpụta izugbe na-akpụdobe nso n'ala anyị, ozi e nwetara na-akọwa na otu ahụ n-ahụ maka nhọpụta ọchịchị n'ala Anyị, bụ INEC n'aha ịchafụ edebànyela aha mmadụ ruru ndè abụọ na narị asatọ n'akwụkwọ na steeti Anambra maka inweta akwụkwọ ikike ha.
Igbusi Mmadụ na Plateau: Onye Kwuru Na M Gbara Nkịtị? --- Buharị...
Onyeisi ala anyị bụ Muhammadụ Buharị akọwaala ya dịka nkọghèri na asị ocha ghe anya oghe, bụ akụkọ ahụ ndị mmadụ na ebugharị na-asị o nweghị ihe ọbụla nwere isi o kwuru banyere mgbusi ahụ e gbusiri imirikiti ụmụ mmadụ aka ha dị ọcha na steeti Plateau n'izu ụka gara aga site n'aka ndị Fụlani, ma gọọ aka na ọkpa ya banyere nke ahụ, ọ bụnadị dịka o mere ka a mara na o kwuru ihe o kwesiri ikwu.
E Kwuola Mkpa Ọ Dị Inyocha Ụgbọala Oge Ọbụla...
A kọwaala mkpa ọ dị ịdị na-enyocha ụgbọala na ndị na-akwọ ụgbọala oge ọbụla iji hụ na ha nọ n'ezi ọnọdụ, na iji wee bèlata ihe mberede okporo ụzọ.
A Kpokupla Ndị Anambra Ka Ha Makụọ Otu Ndọrọ Ndọrọ APGA...
A kpọkuola ụmụafọ steeti Anambra na ndị Igbo gbaa gburu gburu ka ha makụọ, bata ma were otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị APGA dịka otu ndọrọ ndọrọ ha n'ihi ezi ọdịnihu, ịdị n'otu na agamnihu nke ahụ ga-ewetere ha.
Gere nu ajuju onu a Chidi Igwe gbara Okammuta Chika Okpalike, onye na-akuzi nkuzi na mahadum Nnamdi Azikiwe n'Awka.
Ndị Bishọọpụ Edegara Buharị Akwụkwọ Maka Ndị Otu Kristi A Mara Ikpe Ọnwụ...
Otu jikọtara ndị bishọọpụ n'ụwa gbaa gburu gburu bụ ndị a maara dịka 'World Council of Bishops" edegarala onyeisi ala Nigeria bụ maazị Mụhammadụ Buharị akwụkwọ banyere mmadụ ise ndị otu Kristi ahụ a mara ikpe ọnwụ n'abalị iri na otu nke ọnwa Juunu a, ma rịọ ka a tọhapụ ha.
Ndị Eze Ọdịnala Anambra Etoola Obianọ Maka Ezi Ọchịchị, Kwe Nkwa Ịkwàdò Ya...
Otu jikọtara ndị eze ọdịnala na steeti Anambra etoola aka na-achị steeti ahụ, bụ gọvanọ Willie Obianọ n'ihi ọtụtụ ọrụ ọma dị iche iche o ji n'aka nakwa ọtụtụ ihe ndị ọzọ o mepụtagoro na ngalaba dị iche iche na steeti ahụ.